Sida loo rakibo iOS 9-kayga iPhone | Wararka IPhone
Sida Craig Federighi uu ku ballanqaaday 8-dii Juun WWDC Keynote, hadda waa suurtagal in la rakibo beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 9, kaas oo ku beegan beta-kii saddexaad ee soo-saareyaasha. Waa wax macquul ah in Apple ay sii deyso nuqulkii ugu horreeyay ee dadweynaha markii ay horay u khaldeen nidaamka tan iyo, haddii kale, kuwa aan horumarin lahaan doonin dhibaatooyin badan oo badan, wax aan gebi ahaanba loo baahnayn.
Waxaad leedahay a maqaal faahfaahsan ku saabsan wararka ku jira beta-kan seddexaad ee loogu talagalay horumariyeyaasha / ugu horreyntii dadweynaha laakiin, si macquul ah, waxaa jiri doona warar badan oo ka badan kuwa ku xusan maqaalka haddii aad rakibto iOS 9 markii ugu horreysay. Wararka guud ee la socda iOS 9, waxaan iftiimin lahaa Apple Music, codsiyada cusub ee Notes-ka iyo badhanka "Ku laabo ...", oo ah saddexda shaqo ee ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhacay.
Si loo rakibo betasyada dadweynaha, waa inaad iska qortaa, si aaladda la doortay ay u heli doonto betas iyo cusboonaysiinta mustaqbalkooda. Marka xigta waxaan u gudbineynaa faahfaahinta tillaabooyinka la raacayo si aad ugu biirto betas oo aad u rakibto macruufka 9 beta beta.
Sida loo rakibo iOS 9 beta beta
Aan aadno bogga Barnaamijka softiweerka beta.
Waxaan dhigay our Tufaax aqoonsi.
Waan ciyaarnay U heeso/ Saxeex soo gal.
Markaad gudaha gasho, waxaanqor qalabkaaga".
Laga soo bilaabo qalabkeena iOS waan ku soconaa beta.apple.com/profile, waxaan kala soo baxnaa astaanta oo aan rakibnaa.
Iyada oo astaanta lagu rakibay waxaan ku cusbooneysiin karnaa OTA ama iTunes
Waa inaad tixgelisaa inaad rakibi doonto beta. In kasta oo ay u dhiganta tahay beta-kii saddexaad ee soo-saareyaasha, haddana weli waxaa la filayaa inay dhibaatooyin iyo dib-u-dhacyo jiraan, sidaa darteed, haddii aad rakibto, kuma xirna qalab ay shaqadaadu ku tiirsan tahay ama aad u isticmaasho wax aad muhiim u ah. Ma jeclaan doontid inaad aragto sida, daqiiqad deg-deg ah, iPhone-kaaga uu barafoobayo oo aad seegto wicitaan muhiim ah ama aadan helin wax aad jeclaan lahayd inaad ogaato. Ma aha wax ay tahay inay dhacdo, laakiin way u sahlan tahay inay ku dhacdo beta marka loo eego nooca ugu dambeeya. Waa muhiim inaad tan maskaxda ku hayso. Aniga, tusaale ahaan, waxaan ku leeyahay iOS 9 iPhone 5s oo ah taleefankayga dayactirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo rakibo iOS 9 iPhone-kayga
maxaa cusub oo u qalma?
Jawaab Josué Valenzuela
Ha sameyn. Waxaa jira iswaafajin la'aan codsiyada badan. Waxay kaloo leedahay cayayaanka, sida beta oo dhan. Wax yar sug oo ha samayn waxa aan sameeyo.
Jawaab Brandon Brandon
Jawaab Roy Villalba
Way ila shaqeysaa aniga
Jawaab Leo Rom
Xaqiiqdii waxaan isku dayay inaan u diro farriin qoraal ah WhatsApp anigoo adeegsanaya makarafoonka (maahan fariin maqal ah) laakiin waxaan ku xusayaa qoraalka, waxaana jira dhawaq garaac garaacis ah oo aan joojin doonin ciyaarista illaa aan mar kale u adeegsado codsi cod ah, dhowaan oo aan hadda helay, mar hore ayaan u diray jawaab celin
Waan rakibay waana fiicantahay waxyaabo yar yar oo aan aniga aniga saameyn badan igu yeelan
Ku jawaab Carlos Uribe
Haye, xalay waxaan rakibey beta, maqaalkii hore waxay ku yiraahdeen waxaad horeyba u rakibi kartaa ios9 beta "3" laakiin runti waa beta 1!
Tani waxay ku jirtaa iPhone 6, waxaan isku arkaa waxyaabaha soo socda:
1- kumbuyuutarka markaad fureyso fure uma sii weynaanayo sidii hore!
2- Ma aanan arkin sida loo sameeyo sawirada ama inta ka hartay hagaajinta qeybta qoraalada!
3- whatsappku sifiican ayuu iigu shaqeeyaa aniga oo qoraalada u diro sidoo kale
4- si fiican waan jeclahay shaqooyinka badan ee cusub!
5- saameynta cusub ee Siri hirarka ugu badan!
6- iftiinka weyn!
7- Hagaag, barnaamijka cusub ee muusigga, si fiican ugama aanan tijaabin!
Laakiin waxaan rabaa inaan ogaado sababta aynaan ugu guuleysan karin beta 3!
Waad ogtahay haddii beta 3 marka aad qortid furayaasha mar labaad la weyneeyo! Sida xarafka A ee iPhone maanta!
Salaan kadib, wax cusub oo aad aragto ayaan kuu qorayaa!
hello, Gabrielort. Waxaa jira beta isku mid ah oo leh laba magac oo kala duwan: waxaa jira beta seddex oo loogu talagalay dadka wax horumariya iyo kan ugu horreeya ee dadka aan hormarinta lahayn. Labaduba waa isku mid.
Ota ima soo gaarto haddii aan rakibi karo astaanta laakiin cusbooneysiintu ima soo gaarto
Si aad u dhaqaajiso kumbuyuutarka, kaliya waa inaad aadaa goobaha -> guud -> kiiboodhka oo aad dhaqaajisaa "muuqaalka muuqaalka"
Waad salaaman tahay, sidoo kale waan cusbooneysiiyay oo waxaan sameynayaa si xun, Safari wax jawaab ah kama bixinayso daqiiqado kadib x, isku xirka Wi-Fi sidoo kale iima ogolaanayo inaan labo jibaarto… daawashadeyda ... Haddii qof garanayo sida loo hagaajiyo ...
Tani qurux badan, iskuday, sida iska cad waxay leedahay khaladaad yar laakiin waa u qalantaa
Ku jawaab Zahira Hdz Mtz
Matei maryan dijo
Waxaan ku rakibay tan iyo shalay t illaa iyo hadda wax dhib ah ma leh
Jawaab Matei Marian
Iima oggolaaneyso inaan nuqul ka sameeyo iCloud, waxay ii sheegaysaa inaanan boos haysan ... ma jiraa qof og sababta?
Oo waxay ii sheegaysaa in iCloud aan waxba haysan, booska oo dhan lama isticmaalo, oo halkee ku yaal cabitaanadaydii ugu dambaysay?
Ku jawaab Marlon Rivas
Wanaagsan !!! Waxaan u arkaa inay fiicantahay !!!! Mahadsanid
Jawaab Jaime Figueroa
Cumar Caddaan dijo
Nasiib wacan, hadda waan rakibay, ma ogi inay aniga uun igu dhacayso, laakiin kuma qaadi karo sawirro toosh firfircoon. Fiidiyowyo haddii tooshku shaqeeyo.
Ku jawaab Cumar Blanco
Waad salaaman tahay, waxaan rakibay beta-ka dadweynaha 1 ee IOS 9, miyaan ka saari karaa oo dib ma u saari karaa si aan u arko haddii waxyaabaha qaarkood la saxo?
Jawaab si Daniel CM
Sidee gebi ahaanba loo sii daayaa?
Waxaan haystaa iphone 4 waxaanan isku dayay dhowr wado oo aan ku cusboonaysiiyo macruufka mana ii oggolaan doono inaan sameeyo, nooca kaliya ee aan haysto ayaa ah 7.1.2, ma inaan is casilaa oo aan iibsadaa taleefan gacmeed cusub?
Jawaab Nayely González
Waxaan haystaa iphone 4 waxaanan isku dayay dhowr wado oo aan ku cusboonaysiiyo macruufka iima oggolaan doono inaan sameeyo, nooca kaliya ee aan haysto ayaa ah 7.1.2, ma inaan is casilaa oo aan iibsadaa unug cusub?
Mesh The, ciyaar weyn oo lagu jimicsado maskaxdaada
Apple waxay daabacdaa laba ogeysiis cusub oo iPhone 6 ah